भैरब अर्यालको जीवनी - Naya Samaya
Posted by Naya Samaya | May 15, 2016 | साहित्य, साहित्यकार जीवनी |0|
पोखरास्थित कन्धनी डाँडाको भवानी प्राइमरी स्कुलमा पढाउँदा एक विद्यार्थीको नदीमा डुबेर मृत्यु भयो । त्यो घटनाबाट निकै विक्षिप्त बनेका अर्यालले आफैं गोकर्णस्थित बागमती नदीमा हामफालेर जीवनको इहलिला समाप्त पारे । यो संयोग थियो या नियतिको दुष्चक्र ? खैर जे होस्, नेपाली साहित्यले हाँस्यव्यंग्य विधाका एक शिखर पुरुष गुमायो ।
काठमाडौंको उत्तरपूर्वी काँठ क्षेत्र नेपाली साहित्यको तपोभूमि हो भन्दा फरक पर्दैन । भैरव अर्याल, रमेश विकल, नारायण ढकाल, विजय चालिसे त्यहीँ जन्मिए । ढकाल र चालिसे आज पनि साहित्य साधनामा दत्तचित्त छन् । अर्याल र विकलको भौतिक चोला अस्ताएको वर्षौं भइसक्यो ।
३० वर्षकै उमेरमा साहित्य नभका चम्किलो तारा बनिसकेका अर्यालले ४० वर्षको अल्पायुमै देह त्यागे । छोटो समयमै साहित्यको शिखर चुमेका यी महानायकको गुप्त पाटो केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
अर्यालको पूरै जीवनकाल दुःखैदुःखकोे बोझले थिचियो । आफैं पीडामा पिल्सिएको मानिसले कसरी अरुलाई हँसाउन सक्छ ? व्यथाले आक्रान्त भएर थलिएको मान्छेले कसरी अरुलाई मनोरञ्जन दिन सक्छ ? दुनियाँको पीर, व्यथा बुझ्ने सर्जक आफैं किन दुःखको सागरमा डुबेको हुन्छ भन्ने बुझ्न संसार पढिरहन जरुरी छैन, भैरव अर्यालको जीवन पढे पुग्छ ।
व्यंग्य चेतनाका धनी अर्यालको भौतिक शरीर नरहे पनि उनका अमर रचनाहरुले उनलाई सशरीर उपस्थित गराइरहन्छन् र पेट मिचीमिची हाँस्न बाध्य बनाउँछन् । उनले दशकौंअघि गरेका कटाक्ष र व्यंग्य आजको परिवेशमा पनि उत्तिकै ताजा लाग्छन् ।
‘काउकुती-२०१९’, ‘जय भुँडी-२०२२’, ‘गलबन्दी-२०२६’, ‘इतिश्री-२०२८’ ‘दश औतार-२०३४’ लगायत नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट हाँस्यव्यंग्य निबन्धसंग्रहका रचयिता अर्याल आफैंको जीवनमा भने कहिल्यै हाँसो आएन ।
यहाँ कवि, निबन्धकार, समीक्षक, समालोचक, गोरखापत्र दैनिकका उपसम्पादकसमेत रहेका अर्यालको ओझेल परेको पाटो उधिन्ने प्रयत्न गरिएको छ । विस्मृतिको चाङमा थन्किइसकेको उनको जीवनका पाटालाई हामीले धेरेथोर प्रकाशमा ल्याउने प्रयास गरेका छौं ।
नियति अझै निर्मम बन्यो । ०३३ को दसैंको द्वादशी मध्यरात उनले घर छाडे । सँगै सुतेका थिए माइला छोरा प्रकाश । तर, उनले सुइँकोसमेत पाउन सकेनन् । बाबु हराएपछि छोराहरू रोइकराइ गर्न थाले । साथीकहाँ गए कि भन्ने पनि पर्यो । मध्याह्नसम्म पनि घर नफर्किएपछि परिवारको मनमा चिसो पस्यो । सारासंसार खोजे, कतै भेटेनन् । ३ दिनपछि बागमती नदीमा उनको शव फेला पर्यो । नाबालक छोराछोरीले पितृवात्सल्य गुमाएनन्मात्रै, देशले साहित्यको अग्रपुरुष गुमायो । आफू रोएर पनि अरुलाई हँसाउने अर्याल अन्ततः सबैलाई रुवाएर बिदा भए ।
सानै भएकाले छोराछोरीले बाबुको पितृप्रेम पाउन सकेनन् । माया नै नगरेका होइनन् तर उनले अँगालो हालेर बस्ने फुर्सदै पाएनन् ।
अल्पायुमै बाबुले छाडेर गएपछि अर्यालको परिवार निकै समस्यामा पर्यो । आमाले बनिबुतो गरेर हुर्काइन् । बाबु हुँदा पनि न्यानो आलिंगन नभेटेका उनीहरूलाई आमाले निकै कष्ट गरेर पढाइन् ।
जेठा छोरा दीपकले मेट्रोलोजीमा पीएचडी गरेका छन् र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । अर्का छोरा प्रकाशले एमएस्सी गरेका छन् र कलेजमै प्राध्यापन गर्छन् । तीन दिदीबहिनीको पनि आ–आफ्नै घरजम छ ।
०५२ मा कान्छा छोरा बेपत्ता भए । ०६८ मा अामा (भैरव अर्यालकी श्रीमती)को निधन भयो । आमा बित्दा पनि कान्छा छोरा फर्किएनन् ।
प्रकाश भन्छन्, “बुबा बितेको घाउ खाटा बसिसकेको थियो, अचानक भाइ हराएपछि फेरि बल्झियो । आज पनि हामी भाइ फर्कने आशामा छौं ।”
‘चेनस्मोकर’ थिए उनी । दिनको एक बट्टा चुरोट सिध्याउँथे । सिर्जनामा तल्लीन हुँदा घन्टौंसम्म एकान्तमा बस्थे । के–के लेखिरहन्थे । चुरोटका अनेक किस्सा उनका निबन्धमा पनि पढ्न पाइन्छ । ‘चुरोट : केही झिलिमिली संस्मरण’मार्फत त्यसलाई छरपष्ट पारेका छन् ।
“त्यतिबेला ४५ पैसामा १० खिल्ली चुरोट आउँथ्यो,” छोरा दीपक भन्छन्, “त्यति चुरोट एकदिनमै सिध्याउनु हुन्थ्यो, कहिले त त्यसले पनि पुग्दैनथ्यो ।”
उनी रचना र सिर्जनाको माध्यमबाट समाजसित हार्दिक र खुला रूपमै बातचित गर्थे । उनले समाजलाई त बुझाए तर आफैंलाई बुझाउन सकेनन् । दुनियाँलाई आजसम्म हसाउँदैछन् तर आफू हाँस्दै नहाँसी बिदा भए ।
समाजबाट अलग्गयाएर आफूलाई एक्लै हिँडाउन खोजे र अल्यायुमै मृत्युलाई अँगालो मार्न पुगे । स्रष्टा आनन्ददेव भट्ट भन्छन्, “जे होस् भैरवजी गए तर कसैसित दुई वचन नबोली गए । उनले आफ्नो समस्या खुला रूपमा राखेको भए समाधान निस्कन्थ्यो कि ! गुनासो सधैं रहिरह्यो ।”
तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र समाजको संक्रमणबाट उनी पनि प्रभावित थिए । यसैकारण उनको युवा जोस र जाँगर कतिपय सन्दर्भमा राज्यसत्ताको पक्षमा र कतिपय विपक्षमा पटाक्षेप भएका छन् । भैरव अर्यालसँग विमती राख्नेहरू भन्छन्– ऊ कम्युनिस्ट थियो र थिएन ।
उनका कतिपय रचना तत्कालीन सत्ताले वाचन गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगायो । उनको ‘कुक्कुर स्वर्गे हुँदा’ भन्ने कविता गाईजात्रा महोत्सवमा पढ्न दिइएन ।
अनुप्रासयुक्त भाषा र विषयवस्तुको स्वाभाविकताले हँसाउनसम्म हँसाउने, झर्राे शब्द प्रशस्त प्रयोग गर्ने, सामाजिक कुरीतिलाई तीक्ष्ण व्यंग्य गर्ने, सुधारात्मक लक्ष्य लिने र सामाजिक स्वस्थको हुटहुटी भैरवको लेखनमा पाइने साहित्यकार तारानाथ शर्मा बताउँछन् ।
उनले यसै सन्दर्भमा भनेका छन्, “निबन्धमा लोकप्रिय हस्ताक्षर, यस फाँटका अविजेय प्रतिभा, उनको हाँस्यव्यंग्य प्रविधि अत्यन्त प्राञ्जल, मधुमय र तिख्खर देखिन्छ, उनलाई कुनै पनि विषयमा निबन्ध लेख्न कन्नु र गम्नु पर्दैनथ्यो ।”
उनी पाठकलाई हँसाएर व्यंग्यको तीतोपनालाई ग्रहणयोग्य बनाउन सिपालु थिए । उखानटुक्काका साथै अनुकरणात्मक शब्दको विशिष्ट प्रयोग गरेर व्यंग्य कस्न उनी माहिर थिए ।
उनको व्यंग्यचेत उन्नत छ । उनी भन्थे, “एकथरी ठान्लान्– हाँस्यव्यंग्य भनेको अरूलाई उडाएर हाँस्ने, हँसाउने कला हो । तर त्यो उडाइने ‘अरू’ व्यक्तिमा सीमित रह्यो भने त्यस व्यंग्यले हाँस्य होइन, वैमनश्यता सिर्जना गर्छ । त्यसैले व्यंग्य व्यक्तिको होइन, व्यक्तिभित्रका अमिल्दा, बिक्ल्याँटा र बिग्याहा प्रवृत्तिमाथि हुनुपर्छ, जसले त्यसखालका प्रवृत्ति हुनेहरू सबैलाई छुन सकोस् ।”
हाँस्यव्यंग्यकै सन्दर्भमा उनले किटान गरेका थिए, “एकथरीको ठम्याइ के हुन्छ भने उटङ्ग्याइ, ग्रामीणता, अश्लील र अस्वाभाविक चर्तिकलाको चित्रण नगरी हँसाउन सकिँदैन, तर यस्ता चिज केही अंशमा सहायक भए पनि हाँस्यका सञ्चारी व्यभिचारी भाव यीमात्र हुन सक्तैनन् र यस्तैमा मात्र आधारित हाँस्यलाई उन्नत कोटीमा लिन पनि सकिँदैन । वास्तविक हाँस्यव्यंग्य जीवनको वरिपरि घुमेको हुन्छ र सत्यको गहिराइतिर बढेको हुन्छ ।”
नेपाली समालोचना र भूमिका लेखनप्रति उनले उतिबेलै कटाक्ष गरेका थिए । भनेका थिए, “नेपालमा समालोचना र भूमिकाको पनि एक विशेष पद्धति छ । अनुहार हेरेर चिप्लो घस्नु यसको एउटा विशेषता हो भने दौरा हेरेर टिप्पणी गर्नु अर्को विशेषता ।”
समयक्रमसँगै उनका कालजयी हाँस्यव्यंग्यप्रति पछिल्लो पुस्ता बेखबरजस्तै भएको छ । समकालीन साहित्कारहरु उनको नामै लिन नपरे हुन्थ्योझैं गर्छन् । छोरा दीपक भन्छन्, “नेपाली साहित्यका शिखर व्यक्तित्वको सम्झना राज्यलाई पनि छैन ।”
तथापि समाजले उनलाई सम्झिएको छ । उनको स्मृतिमा ०४६ तिर जोरपाटीमा भैरव पुरस्कार गुठी स्थापना भएको छ । रमेश विकल त्यसका संस्थापक अध्यक्ष थिए । हाल रोचक घिमिरेले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।
गुठीले हरेक दुई/दुई वर्षमा प्रतिभावान् साहित्कारलाई पुरस्कृत गर्छ । उनका कृतिहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि परिवारले गुठीलाई नै सुम्पिएको छ । गुठीले अर्यालका केही अप्रकाशित रचना पनि प्रकाशन गरेको छ । र, त्यसलाई देशको सम्पत्ति बनाइदिएको छ ।
‘जय भुँडी’ निबन्ध संग्रहका सर्वाधिकार रत्नपुस्तक भण्डारलाई दिए पनि अन्य कृतिको रोयल्टीको जिम्मा पनि गुठीले नै लिएको छोरा दीपक बताउँछन् ।
उनको सम्मानमा जोरपाटी चोकमा अर्धकदको शालिक निर्माण गरिएको छ । तर, राज्यको स्मृतिमा भैरव अर्याल एकादेशको कथा भइसकेका छन् ।
उनका केही प्रतिनिधि कविताहरू
कुकर स्वर्गे हुँदा
एउटा महान् दुर्घटना भयो
एउटा अपूरणीय क्षति भयो
उद्धार समितिको कारले किचेर
मेरो कुकर स्वर्गे भयो !
कुकुर पनि स्वर्ग जान्छ ? भन्नुहोला
नरक गयो !
तर, नरक त उसले नजाँदै भोगिसकेको थियो ।
एक लाख सम्मानितहरूलाई उसले
एक बिहानभित्र ढोगिसकेको थियो
भक्तिभावमै उसको रौं खुइलिएर गयो !
मेरो कुकुर स्वर्गे भयो !
उसको भुक्ने काम अखबारले खोसे
ढुक्ने काममा शिक्षित बेकार कस्सिए
झैझगडाको दायित्व साहित्यकारले टिपे
पुच्छर हल्लाउनेमा प्रशासक खटिए
अब ऊ आफ्ना सबै कार्यभारबाट मुक्त भयो
अब मुसाहरूले चारकोसे झाडीमा डढेलो लाऊन्
या बिरालाले त्यसमा सिंहदरबार सेकाऊन्
मेरो कुकुरले घ्यार्र घुर्नेसम्म छैन
अब बुद्धको आँखा उडाएर गिद्धहरूले समुद्र तारून्
या सयौं बाज मिलेर एउटा परेवा मारून्
मेरो कुकुरले आँखा उघार्नेसम्म छैन ।
ऊ त ठाडै भीमसेन थापाको सती गयो
आऊ अब शोकसभा गरौं
शोकप्रस्ताव यहाँ रेडिमेड छ
दिवंगत कुकुरको स्मारक बनाउन
एक लाख डलरको इस्टिमेट छ
मामा–भानिज हो ! लौ अब एउटा टेन्डर देओ
स्मारक कालिमाटी भए पनि हुन्छ
तर, माटो किन्न हङकङ जानैपर्छ
यो निर्माण कार्यमा सम्बन्धितहरूले
अलि अलि प्रसाद खानै पर्छ
जाने त गयो, गै गयो
मेरो कुुकर स्वर्गे भयो !
कि ए वीर नेपालीहरू हो ! आओ अब
यो मृत कुकुरको जुँगा उखेलौं
हामी सबका बिरामहरू लुकाउन
यो मुर्दाको टाउको फोरौं
नपत्याए सीआईडीज्यूलाई रिपोर्ट बनाओ भनौं
बडाहाकिमले घुस ज्यूनार हुँदा
यसले रिकापी टोकेको थियो
उपहाकिमले जंगबहादुरको घोडा मिलाउँदा
यसले रित्तो बोतल बोकेको थियो
त्यतिमात्र कहाँ हो र !
भलाद्मीले भद्रतापूर्वक चोर्न लागेको बेला
यो असभ्यले ख्वाङ्ख्वाङ् खोकेको थियो
यसको कुलै यस्तो
उहिल्यै पाण्डवहरू बैकुण्ठ जाँदा
यही कुकुरको जिजुबाजेले द्रौपदीको पिछा गरेको थियो
रुसले रकेट उडाएको बेला
यसको मामाले अन्तरिक्षको भित्तो फोरेको थियो
भन्नुहोस् अब जे भने पनि ऊ नसुन्ने भयो
भीमसेन स्तम्भमुनि गुँडुल्किएर
स्वामीभक्तिको साधन गर्ने यो कुत्तो
भीम मल्लको चिहान खोस्रेर
बफादारीको बिगुल लगाउन खोज्ने यो खिच्चो
साँच्चै कुकुरैजस्तै निरीह थियो, दयनीय थियो
त्यसैले त पूण्यात्माहरूको शिकार भयो
उद्धार समितिको कारले किचेर मेरो कुकुर स्वर्गे भयो !
१० साउन ०३३, जोरपाटी
स्वाँः स्वाँ !
हस् हजूर !
पथ सात–फुटे बस नौ गजको
सिर बीस भए भीड सौतकको
छ त अन्तै सुविधा यसरी
कति असल छ यो मेरो पसल
मानौं प्रकृतिको क्युरियोजस्तो छ
यहाँ पानीभन्दा पसिना सस्तो छ
पसिनाभन्दा आँसु सस्तो छ
अझ अर्को विशेषता यस्तो छ–
यहाँ सबथोकभन्दा रगत सस्तो छ ।
Previousसंघीय गठबन्धनले काठमाडौंमा गर्‍यो प्रदर्शन
Nextक्रिष्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक कमाउने फुटबल खेलाडी
विश्वव्यापी नाट्यशालामा मेरो उपस्थिति